KU SAABSAN | Puntland Maritime Police Force
Puntland Maritime Police Force (PMPF) waa qayb lagama-maarmaan u ah stratejiyada Dawladda Puntland ay kula dagaalamayso burcadbadeedda oo ah mid wajiya badan waxayna waafaqsantahay baaqqa bulshada caalamku ugu yeerayso in si degdeg ah talaabo loo qaado. Beesha caalamku waxay in badan ka codsadeen dawlad goboleedka Puntland iyo dawladaha gobolka in ay kor ku qaadaan dadaalkooka ku aaddan sugidda amnniga badaha iyo la dagaalanka burcad badeedka. Kaalmo deeqsinimo ku dheehan tahay oo naga soo gaadhay dawaladaha aanu saaxiibka nahay, iyo wada sheynta waddaniyadeed dawladda Fedaralka Somalia waxay noo suura gelisay inay Puntland abuurto ciddama ilaalada badaha Puntland (PMPF) si jawaab cad uga bixiso codsiyada uga yimid beesha caalamka, una sugto amnigeeda.
Taageerada PMPF ay siiyaan gargarka aadanaha waxay la xiriirtaa dadaalka PMPF ay ugu jirto la dagaalanka burcadbadeedda iyo sidii xasilooni gobolka loogu soo dabaali lahaa. Dadaalka samafalka ah ee PMPF waxaa ka mid ah: gaynta saadka samafalka , daawooyinka, cuntada iyo biyaha; isbetaalada iyo rugaha caafimaadka oo si joogto ah loo siiyo waxyaabaha ka dhamaada, taas waxaa ka mid ah rugaha caafimaad ee guura una adeega deegaanada go’doonka ah; horumarinta wadooyinka, garoonada diyaarahaha iyo halbawlayaasha horumarka dalka (infrastructure). PMPF waxaa kaloo ay horumarisaa bulshada deegaanada iyaga oo siiya tababaro ay ka bartaan xirfado wax ku ool ah.
Puntland Waxaa ka Go’an la Dagaalanka Burcadbadeedda
Dawladda Puntland waxa ka go’an in ay kala dagaalanto burcadbadeedda xeebaha Soomaaliya waxayna ka gaartay horumar la taaban karo. Sanadkii 2010, Golaha Wakiilada Puntland waxaa laga ansixiyay sharcigii ugu horeeyay Somaliya oo lid ku ah burcadbadeeda, kaasoo si gaar ah u saameeya dembiyada burcadbadeednimada. Hadda waxaa xabsiyada Puntland ku jira in ka badan 200 oo maxbuus kuwaas oo lagu tuhunsanyahay burcadbadeed maxkamadna sugaaya. Tiradani waxay noqonaysaa tan ugu badan ee maxaabiis burcadbadeed Soomaali ah inkasta oo maxaabiis burcadbadeed Soomaali ahi ku xiran yihiin in ka badan 20 dal s ida ay warisay U.N. Office on Drugs and Crime (UNODC).
Illaa iyo intii la ansixiyay sharcigan muhiimka ah, Dawladda Puntland waxay waddaa qorshe burcadbadeedda lagula dagaalamayo oo wajiya badan leh waxaana ka mid ah: samaynta ciidan xirfad gaar ah u leh ilaalinta xeebaha si loola dagaalamo burcadbadeedda loona ilaaliyo khayraadka badda ee gobolka; olole wacyigelin laguna bartilmaamsanaayo in laga niyadjebiyo in burcadbadeed cusub la hawlgeliyo iyo in burcadbadeeda waantowda dhaqancelin loo sameeyo; in burcadbadeedda waantowda loo sameeyo barnaamijyo u tababara shaqo iyo xirfado cusub; iyo in dardargelin cusub lagu sameeyo sidii loo noolayn lahaa dhaqaalaha bulshada xeebaha deggan.